Ragga Stylish Waxay soo ifbaxday sanadkii 2008 sidii hindise la doonayey in lagu koobo dhammaan arrimaha khuseeya nin isku gees ah. Sidan oo kale, hadafkeenu waa adeegsadayaasha degelkan inay awood u yeeshaan inay lahaan karaan, u labistaan ​​si habboon isla markaana ay u ilaaliyaan nadaafadda iyo daryeelka shakhsi ahaaneed. Marka la soo koobo, dadka adeegsada Internet-ka waxay leeyihiin Rag qaab leh tiirarkooda tixraaca ee internetka.
Caadi ahaan, tani waxay suurtagal tahay oo keliya mahadnaqa kooxda tifaftirka ee ka dambeysa HcE, oo aad ka heli karto hoosta. Haddii aad u malaynayso inaad wax ku darsan karto bartayada oo aad rabto inaad ku biirto kooxdan tifaftirayaasha ah, waad nala soo xiriiri kartaa Halkan. Waxaad sidoo kale booqan kartaa qeybteenna qaybaha, halkaas oo aad ka akhrisan karto dhammaan qodobbada aan daabacnay sanadihii la soo dhaafay.
Waa sharaf in aad awooddo inaad siiso talada ugu fiican ee qaabeynta, daryeelka iyo qaab nololeedka ragga. Waan ku faraxsanahay wax kasta oo la xiriira adduunkeeda isla markaana awood u leh inaan ogaado xad-dhaafka qurxinta iyo noocyada kala duwan ee ay ku jiraan qaabkeeda moodada. Baro wax kasta oo aad ka heli karto qaar ka mid ah tilmaamaha iyo tabaha aan halkan ku soo jeedinayo.
Waxaan jeclahay inaan ku noolaado nolol caafimaad leh, jimicsi jimicsi iyo cunista cunto caafimaad leh. Taas awgeed, waan la socodsiinayaa arrimaha caafimaadka la-tashiga warbaahinta kala duwan. Sidoo kale, waxaan jeclahay inaan la wadaago wax kasta oo aan ka barto ilaha aan ka helo.
Waxaan jeclahay adduunka nolosha caafimaadka leh, gaar ahaan mowduucyada la xiriira jir dhiska iyo nafaqada. Had iyo jeer raac mabda'a 'Mens sana in corpore sana'. Iyo aragti cilmiyaysan. Intaa waxaa dheer, waxaan leeyahay tababar ku saabsan arrimaha caafimaadka iyo ka hortagga halista, iyo maareynta deegaanka ee shirkadaha. Wax muhiim ah, maadaama aadan caafimaad heli karin la'aan jawi caafimaad qaba.
Anigu waxaan ahay tababare shakhsi ahaaneed iyo nafaqeeye isboorti. Waxaan naftayda u huray adduunyada jimicsiga iyo nafaqada sanado badan waana jeclahay wax walba oo ku saabsan. Boggan waxaan ku dareemayaa inaan ku biirin karo dhammaan aqoontayda ku saabsan jir-dhiska, sida loo helo cunno sax ah oo keliya ma aha in la helo muuqaal wanaagsan, laakiin si loo helo caafimaad.
Waan ku jeclahay ragga labiskooda. Hadaad jeceshahay inaad marwalba lasocoto waxkastoo dhaca oo ku saabsan moodada iyo quruxda raga markaa waxaan kugula talinayaa inaad aqriso qoraaladayda
Wuxuu ku dhashay magaalada Malaga sanadkii 1965, Fausto Antonio Ramírez wuxuu si joogta ah gacan uga geystaa warbaahinta kala duwan ee dhijitaalka ah. Qoraa sheeko xeel dheer, wuxuu ku leeyahay daabacado dhowr ah suuqa. Wuxuu hadda ka shaqeynayaa sheeko cusub. Xamaasad badan oo ku saabsan adduunka moodada, caafimaadka dabiiciga ah, iyo bilicsanaanta ragga, wuxuu ka soo shaqeeyay warbaahin kala duwan oo ku takhasusay maadada.
Sawirka meeleynta Carlos Rivera
Stylist, ganacsade muuqaal leh iyo tifaftiraha moodada & qaab nololeedka. Waqtigaan la joogo waxaan lashaqeeyaa shirkado kala duwan iyo warbaahinta madaxbanaan. Waad igu raaci kartaa barteyda shaqsiyadeed, dabcan, waxaad igu aqrisan kartaa 'Ragga Qaabka leh'.